Aasaarbaadhayaal, baadha biyaha hoostooda ayaa BBC-da u sheegay in firidh ka hadhay Fircoon laga dhex helay xabaalo ku yaalla ahraam hoostood. | Biyoguurenews.com
Home Wararka Aasaarbaadhayaal, baadha biyaha hoostooda ayaa BBC-da u sheegay in firidh ka hadhay...
Aasaarbaadhayaal, baadha biyaha hoostooda ayaa BBC-da u sheegay in firidh ka hadhay Fircoon laga dhex helay xabaalo ku yaalla ahraam hoostood.
Pearce Paul Creasman iyo kooxdiisiii ayaa ahaa dadkii ugu horreeyey ee aada xabaalahaasi 100 sano kaddib, xaaladdaas oo ay adkayd in la galo waxna laga helo maxaa yeelay biyo ayaa qariyey aaagga ay ku yaallaan.
Mr Creasman ayaa BBC-da u sheegay, inay ahayd xilligii ugu horreeyey ee aasaarbaadhayaasha biyaha hoostooda baadhaa ay Suudaan tagaan, gaar ahaanna goobta xabaalahaas oo u dhaw Nuri.
Waxayna heleen weel dhoobo ka samaysan iyo caleemo dahab ah.
Waxayna sheegeen in dahab kale oo hadhaa ahi, weli yaal goobtii – sidoo kale weel leh samayska koobka oo kale ayaa iyana dahab ka samaysan. Inkasta oo biyuhu burburiyeen, haddana dahabkii oo qurbo ahi yaallaan ayuu u sheegay BBC-da.
Wuxuuna sheegay inay ka tageen boqorradii Nastasan, oo ah qayb ka mid Faraaciiintii kuwaas oo xukumay boqortooyadii Kush, sannadihii 335 Ciise hortii illaa 315.
Mr Creasman ayaa u sheegay BBC-da in kooxdiisu ay muquurteen intii ay kareen, ku dhawaad 65 tallaabo oo hoos ah, taasoo geysiisay inay gaadhaan halka laga galo xabaalahaas, sida oo kale waxaannu hellay ayuu yidhi jaranjaro oo aannu hoos u soconnay illaa 40 kaabadood, illaa aannu ka gaadhay sagxaddii biyaha aannuna xaqiiqsannay inaanaan halkaa hore u dhaafi karin.
Wuxuunta intaa ku daray, inay gaadheen guul la taaban karo.
Waxaa jira saddex qol oo leh saqafyo qurux badan, waxayna u eegtahay baaxadda bas yar, waxaad aadi kartaa oo midba ugasoo gudbi kartaa qolka xiga, waa meel madow, waxaad ogtahay inaad ku jirto xabaal haddii nalalka ileyskaagu aanu joogin. Halkaas ayay ka bilaabatay siraha aannu helnay” ayuu yidhi
Goobtan ayaa ka mid ah goobihii hore ee ka tirsanaa boqortooyadii Nuri, taas oo ku faaftay in ka badan waqooyiga Suudaan.
Ahraamtan ayaa ah meelaha ay ku aasan yihiin boqorradii Kushitigga, kuwaas oo mararka qaar lagu qeexo ‘ Faraaciintii madoobaa’. Boqortooyadii Kuush ayay ugu danbaysay in kabadan kumannaan sano, xilligaas oo ay ahayd qarnigii siddeedaad Ciise Hortii, waxay u talin jireen Masar halkaas oo ay xukumayeen ku dhawaad qarni.
Farqiga keliya ee u dhexeeya ahraamta Suudaan, ayaa ah in kuwa Masar ka caansan yihiin maaddaama boqorro badan
Previous articleHadalka Farmaajo Waa Dameer Ciyey….” Madaxweyne Muuse Biixi + [ Muuqaal
Next articleSaladiinta Iyo Guddida Garxajis Oo Aqbalay Shirkii Burco “ Wuu Qabsoomayaa Shirka Habarjeclo Ku Dhawaaqdey